के सदस्यता ड्रपडाउनले काम गर्दछ? | Martech Zone
जब हामीले हाम्रो न्यूजलेटर पुन: सुरू गर्‍यौं, म सदस्यता लिंकलाई हाम्रो साइटमा एक प्रभावशाली सुविधा बनाउन चाहन्छु। हामीले साइटको शीर्षमा ड्रप-डाउन सेक्सन थपेका छौं र यो अविश्वसनीय भएको छ। जबकि हामी पहिले एक वा दुई ग्राहकहरूको ट्रिकल प्राप्त गर्न सक्दछौं, अब हामी प्रत्येक हप्तामा दर्जनौं ग्राहकहरू पाउँछौं। मार्केटिंग टेक्नोलोजी न्यूजलेटर लगभग लोकप्रिय बढ्दैछ, लगभग with,००० ग्राहकहरूसँग!
म त्यहाँ केहि थप ड्रपडाउन थप्न चाहन्छु - सायद फेसबुक, ट्विटर, भिडियो, पोडकास्ट, र खोज ट्याब। यो नयाँ पृष्ठमा नेभिगेट गर्न प्रयोगकर्ताको आवश्यकता बिना नै सामग्री खुलासा गर्ने एक उत्तम तरिका हो। साथै, यसले लिने फुटप्रिन्ट साइडबारमा सदस्यता फाराम भन्दा धेरै सानो छ!
हीटम्याप द्वारा प्रदान गरिएको थियो पुनर्विग्रह। यदि यो हिटम्यापको लागि होईन भने, मलाई यकिन छैन कि मैले त्यहाँ कति जना मानिसहरूलाई क्लिक गरेको महसुस गरें! अब त्यहाँ मेसेजिंगलाई उनीहरूको सदस्यता लिनको लागि बलियो बनाउनको लागि समय आइसकेको छ।
टैग: हीटम्यापहीटमैपिंगपुनर्जीवित गर्नुहोस्
समय भनेको मार्केटिंग प्रोफेशनल्सको लागि चुनौती हो
प्रभाव मार्केटिंग रणनीतिहरू